FAMPANANTENAN’NY PRAIMINISITRA : Hitohy ny fitakian’ny SMM raha tsy misy vahaolana maharitra
Taorian’ny fito andro nanatanterahan’ny sendikan’ny mpitsara fitokonana faobe manerana ny Nosy dia nanaiky ny hiverina hamoha ny varavaran’ny Fitsarana izy ireo rehefa nisy ny fifampiresahana tamin’ny fitondram-panjakana. 28 juillet 2017
Anisany nanome tosika ireo mpitsara tamin’ny fiverenan’izy ireo handray ny asany ny fampanantenana nataon’ny Lehiben’ny governemanta. Nilaza tamin’izany ny Praiminisitra Mahafaly Solonandrasana Olivier fa hijerena ny vahaolana maharitra ny fitakiana ataon’ny sendikan’ny mpitsara eto Madagasikara io.
Miara-mifanome tanana amin’izay fikarohana ny marimaritra iraisana izay ny minisiteran’ny Fitsarana, ny eo anivon’ny Primatiora sy ny tompon’ny fitakiana.
Hatreto anefa dia nambaran’ny SMM mazava tsara fa mbola mijanona ho kabary ambony latabatra sy fampandriana adrisa fotsiny ny azon’izy ireo satria mbola tsy tena hita izay fampiharana mivantana izay vahaolana naroson’ny Fanjakana.
“Raha tsy misy valiny ireo zavatra nangatahinay dia tsy maintsy mbola mitohy ny fitakiana”, hoy ny filohan’ny sendikan’ny mpitsara eto Madagasikara, Fanirisoa Ernarivo. Nambarany ihany koa fa efa nisy ny fitakiana izay efa natao tamin’ireo fahefana mpanatanteraka, ka aorian’ny fanapahan-kevitra horaisin’izy ireo no ahalalana na nekena izany na tsia. Ankoatra izay voalazany ihany koa fa tao anatin’izay andro maromaro tsy nandrenesana azy izay dia nandeha niatrika fiofanana tany ampitan-dranomasina ny tenany.
Nisy tamin’izany ny fihaonany tamin’ireo mpitsara vahiny, no mbola nampahafantatra ny zava-misy iainan’ny mpitsara Malagasy tamin’ireo mpanao gazety vahiny ihany koa izy.